Tourde Myanmar – Page2– Travel Tour
October 22, 2019 Tourde Myanmar
✨နိုဝင်ဘာမှာ ရှော့ပင်းထွက်မယ် ဘန်ကောက်ကိုကွယ်✨
September 30, 2019 Tourde Myanmar
တိုးဒီရဲ့ “ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်”နဲ့ “ပါရီရဲ့ ဆောင်းဒဏ္ဍာရီ”
ဒူဘိုင်းဆိုတဲ့ ကန္တာရအိုအေစစ်ကို အလည်သွားတဲ့ တိုးဒီရဲ့ ဧည့်သည်တော်များ
August 14, 2019 September 12, 2019 admin
East Meets West (သို့မဟုတ်) အာရှနှင့်ဥရောပဆုံဆည်းရာ
ဒီနေရာလေးကို စိတ်ဝင်စားခဲ့မိတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ဘော့စဖောရပ်စ် ရေလက်ကြားဟာ ဒီမြို့လေးကို အာရှနဲ့ ဥရောပရယ်ဆိုပြီး ပိုင်းခြားထားတယ် ဆိုတာကို ဒီနေ့အထိ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ရောက်ခဲ့ပြန်တော့လည်း အာရှရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ ဥရောပဆန်ဆန် လှနေတာကို တွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီကို လိုက်နာကျင့်သုံးကြပြန်တော့ လူတိုင်းလွတ်လပ်ခွင့် ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့။ ခေါင်းမြှီးခြုံတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မတွေ့သလောက် ရှားတယ်ဆိုရင် ယုံပါ့မလား။ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ရှာကြည့်ကြပါတော့နော်။ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ရှိတဲ့အတွက် ဗလီတွေရှိသလို Church တွေလည်းရှိပါတယ်။ ‘Seven Church of Asia’ ဟာ တူရကီနိုင်ငံထဲမှာ ရှိတာမို့ ခရစ်ယာန်ကို ကိုးကွယ်ကြသူတွေအနေနဲ့လည်း အရေးပါတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တိုးဒီတို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ တူရကီအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ‘Cappadocia’ […]
လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ခရီးသွားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ခရီးသွားမလား၊ အိမ်မှာနားမလား လို့ပြောရင်တော့ လူ ၁၀၀ မှာ ၉၈ ယောက်လောက်က ခရီးသွားမယ်ပဲ ပြောကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ခေတ္တခဏ အနားယူဖို့၊ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အတွက် ကိုယ်မသိတဲ့နေရာဒေသတွေကို သွားရင်း အားသစ်တွေပြန်ဖြည့်ဖို့ လိုတဲ့အတွက်ပါ။ အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ခွန်အားအသစ်တွေနဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့ ခရီးသွားခြင်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို များစွာသော ကောင်းကျိုးတွေကို ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ win – win လို့ပြောရမှာပါပဲ။ ခရီးသွားခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လိုပျော်ရွင်မှုတွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိအောင် တိုးဒီမြန်မာက မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. ခရီးသွားခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့စေပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။ 2. ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် စက်ရုပ်သဖွယ် လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေတဲ့ ဘဝထဲကနေ […]
လူတိုင်းမှာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ကရော ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ? ပြောရရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက ကျွန်တော်အမြဲစိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ အိပ်မက်ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ အီဖယ်တာဝါ ကို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ သွားချင်တာဗျ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ အီဖယ်မျှော်စင်ကိုကြည့်ပြီး ဝိုင်ခွက်ကို အတူသောက်ရတဲ့ အရသာကဘယ်လောက်တောင် ကြည်နူးဖို့ကောင်းလိုက်မလဲ….စဉ်းစားရင်းတောင် ပျော်လာပြီဗျာ…. တစ်နေ့ ကျွန်တော်သွားရင် အီဖယ်တာဝါနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတာတောင် စဉ်းစားထားပြီးသား…. သူများတွေ ဘယ်လိုပုံလေးတွေ ရိုက်ကြလဲဆိုတာတောင် ရှာပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေစုထားသေးတယ်။ တိုးဒီမြန်မာကလည်း ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ခရီးစဉ်လေးကို ကျွန်တော့် စိတ်တိုင်းကျလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ ခရီးသွားရတော့မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တိုင်းကို ကျွန်တော်အမြဲ စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖူးစာဖက်လေးနဲ့ကလည်း စိတ်ကူးချင်းထပ်တူဆိုတော့ ပျော်စရာပေ့ါဗျာ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ လက်တွေ့မှာ တကယ်ဖြစ်လာဖို့ကူပြီး အကောင်ထည်ဖော်ပေးတဲ့ တိုးဒီမြန်မာကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရင်း…… ကျွန်တော်စုထားတဲ့ […]
ချင်းမိုင်ရဲ့ တူယှဉ်နွှဲပြိုင် တန်ဆောင်တိုင်
ဆီမီးငယ်ထိန်လင်းလို့ သီတင်းကျွတ်ပြီးရင်တော့ ၊ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို တိုးဒီတို့ ခရီးသွား ချစ်ဧည့်သည်တွေနဲ့ အတူ တူယှဉ်နွှဲပြိုင်ဖို့ ချင်းမိုင် လွှိူင်ကရသုန်ပွဲ (ခေါ်) ဆီမီးရေမျှောပွဲလေးကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးလေး ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အရှေ့တောင်အာရှသားတွေရဲ့ အကြွယ်ဝဆုံးဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေထဲက နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလရဲ့ လပြည့်ညလေးမှာ တူညီစွာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ပွဲတော်လေးကတော့ မြန်မာတန်ဆောင်တိုင်၊ ကမ္ဘော ဒီးယားရဲ့ ဘုန်အွမ်တုတ် (Bon Om Tuk) ပွဲတော်နဲ့ ချင်းမိုင်ရဲ့ လွှိုင်ကရသုန်(Loy Krathong) ပွဲတော်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ဆီမီးရေမျှောပွဲလေးမှာ ရည်မွန်တဲ့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ ဆုတောင်းကြရင်း ဆီမီးလေးတွေ အတူတူရေမျှောကြဖို့ တိုးဒီရဲ့ နိုဝင်ဘာ ချင်းမိုင်ခရီးစဉ်လေးကို လိုက်ခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်….. […]
အီဂျစ်ကို ဘယ်လိုစခဲ့တယ်ဆိုတာပြောရရင်တော့ ခရစ်တော်မတိုင်ခင် နှစ်ပေါင်း 3100 BCE (Before Common Era) ဝန်းကျင်မှာ Narmer ဆိုတဲ့ ဖာရို (Pharaoh) ဘုရင်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးကလီယိုပက်ထရာ နံပါတ် ၇ (Cleopatra Vll)နဲ့ 30 BCE မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ။ အခုချိန်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆို နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ။ အီဂျစ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ Phaorah အမည်ရ ရှေးဟောင်းအီဂျစ်ဘုရင်တွေရယ်၊ အံ့မခန်း ပိရမစ်ကြီးတွေရယ်၊ မံမီရုပ်အလောင်းတွေရယ်၊ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး နိုင်းမြစ်ကြီးရယ်၊ hieroglyphic writing ခေါ် ပုံတွေနဲ့ ရေးခဲ့ကြတဲ့ အီဂျစ်အရုပ်စာတွေက ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံးပေါ်လာကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ရှေးဟောင်းအကျဆုံးနဲ့ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံး အဆောက်အဦးတွေနဲ့ […]
အသက် (၃၆) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မက်ဟန်မာကယ်လ် ( Meghan Markle) ဟာ သူမ အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်မှာ အင်္ဂလန်ကို အလည်အပတ်လာရင်း ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နောက်ခံ အမှတ်တရနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ နောက် (၂၁) နှစ် အကြာမှာတော့ ဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့ တော်ဝင်မိသားစုဝင် အဖြစ်နဲ့ မင်းသားဟယ်ရီလက်ကိုတွဲလို့ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အမှတ်တမဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံဟာ ဘယ်လောက်များ အမှတ်တရတွေဆီကို သယ်သွားနိုင်လဲဆိုတာ သက်သေပါပဲ။ ကိုယ့်မှာရော ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ကံမပါဘူးလို့ ဘယ်သူကြိုသိနိုင်မလဲနော်? ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေ မဖြစ်ချင်ဦးတောင်မှ အင်္ဂလန်ဆိုတာ သြဇာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ University of Oxford နဲ့ University of Cambridge အစရှိတဲ့ […]
Tagged dubai, tourdemyanmar
ဟနွိုင်းလား? ဒါနန်းလား? ဆာပါးလား?
Copyright©2019 Tourde Myanmar. All rights reserved. | Theme: Color Blog by Mystery Themes.
Copyright©2019 Tourde Myanmar. All rights reserved.